Fametrahana Apple TV miaraka amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Aorian'ny fanavaozana vaovao 6.0 de Apple TV fantatra fa miaraka amin'ity kinova vaovao ity dia azonao atao ampifanaraho amin'ny iPhone ny fitaovana, iPad na iPod Touch miaraka amin'ny iOS 7. Apple androany dia namoaka antontan-taratasy amin'ny antsipiriany momba ity fisongadinan'ny Apple TV vaovao ity, tsy fantatry ny maro, taorian'ilay kinova farany vaovao an'ny rindrambaiko.
Azo ampiasain'ny mpampiasa manana ny Apple TV andiany faha-3 miaraka amin'ilay rindrambaiko vaovao ary mamindra ho azy ny fikirana amin'ny tamba-jotra, ny fampahalalana momba ny Apple ID sy ny fiteny tianay manao haingana kokoa ny fametrahana anao. Ny fifanakalozam-baovao dia tanterahina amin'ny alàlan'ny Bluetooth, amin'ny fomban'ny teknolojia NFC, miaraka amin'ny fikitihan'ny fitaovana iOS amin'ny Apple TV, manararaotra ny rafitry ny Bluetooth natsangana tao amin'ny fitaovana Apple rehetra taorian'ny iPhone 4.
El antontan-taratasy fanohanana Apple dia misy lisitr'ireo torolàlana amin'ny antsipiriany momba ny fananganana tsikelikely:
Ampifandraiso amin'ny fahitalavitra Apple ny fahitalavitra Apple ary miandry ny Apple TV hampiseho ny efijery fanomanana azy.
Vohay amin'ny iOS 7 ny fitaovanao mampihetsika ny Bluetooth anao raha mbola tsy navotsotra ianao. Ianao koa mila maka antoka fa mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi mitovy izay ampifandraisin'ny Apple TV.
Kitiho ny Apple TV amin'ny fitaovanao iOS ary miandry ny torolàlana izay hiseho amin'ny fitaovana iOS sy Apple TV.
Ampidiro ny Apple ID sy ny teny miafinao amin'ny fitaovana iOS, ao amin'ny varavarankely pop-up izay hiseho.
Ao amin'ny Apple TV, safidio raha tianao ny hahatadidy ilay tenimiafinao Apple ID, ary raha tianao ny handefasan'ny Apple TV angona amin'i Apple.
Ny Apple TV hanomboka ho azy ny fizotran'ny fananganana, ao anatin'izany ny fampifandraisana amin'ny tamba-jotra Wi-Fi, ny fampiatoana ny Apple TV, ary ny fametrahana ny kaontinao iTunes Store.
Alohan'ny nampidirina tao amin'ny rindrambaiko 6.0 ho an'ny Apple TV ity fampisehoana vaovao ity dia a dingana mandreraka izay nitaky ny fampifandraisana ny klavier Bluetooth na ny fampiasana ny fanaraha-maso lavitra mba hisafidianana sy hisafidianana tsirairay ireo litera sy ny fotoana ampidiriny. Aza adino koa fa amin'ny famindrana ny angona angon-drakitra dia mila a IPad taranaka faha-4 na taty aoriana, iPhone XNUMXs na taty aoriana, iPad mini, na iPod touch amin'ny taranaka faha-XNUMX. Ity endri-javatra vaovao ity dia tsy miasa amin'ny iPhone 4 sy iPad 2 noho ny fitaovan'ireo fitaovana ireo.
Efa nandamina ny Apple TV amin'ity fomba ity ve ianao?
Fanazavana fanampiny - Ny fanavaozana ny lozisialy Apple TV 6.0 dia azo alaina aorian'ny fanamboarana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Ahoana ny fomba hananganana ny Apple TV amin'ny fitaovana iOS 7
Fx dia hoy izy:
Tsy misy hafatra toa mampifandray ilay fitaovana amin'ny Apple TV ary ity dia taranaka fahatelo amin'ny iPhone 5
Valiny amin'ny Fx
Jorge novoa dia hoy izy:
Apple TV dia tsy miseho amin'ny iPhone-ko
Mamaly an'i Jorge novoa